Fikradaha Jaaliyadda ssc Khatumo2 Muqaalo taariikh Wararka Waraysi Wikileaks Youtube January 13, 2018
Garoowe(Allssc):Waxaa Saxafada si kala gooni ah ula hadlay Kooxda Bahal Higlo ee laba gardaaqa ah ee Dhaqalaha ka hela Jabhada SNM iyo Jabhada SSDF ee Garoowe. Kooxdan ayaa caado ka dhigatay in wakhtiga shacabku kacsanyahay ay ku af gobaad sadan waan midaysanahay iyo dagaal baan qaadaynaaa, taas oo ka mida tabaha shacabka aan wax sii dareemin lagu dajiyo.
Dhinaca kale waxaa Saxafada si cad oo badheedh ah Runta ugu sheegay Beesha Ciise Maxamuud oo uu uga digayo in dagaal ay galan madama dagaalku ku dhacayo Garoowe iyo Beesha Ciise Maxamuud, kuwa qixi doonana ay iyagu yihiin. Afwaliinje waxaa si badheedha cid kasta ugu sheegay in Jabhada SSDF iyo SNM ay xidhiidh wanaagsan oo soo jireena leeyihiin wax dagala oo dhacayana uusan jirin.
Hadaba Akhritow waxaa u baahan in ay hadlan oo Run sheegaan ay tahay Shacabka Khaatumo madama ay Arkeen, Dhagaysteen ayna Maqleena Hoosgalada Bahal Higlo iyo Horjogayasha Jabhada SSDF iyo SNM.
Tagged afwaliinjebahal higlofeaturedisimada bahal higloisimada dadkoda duleeyayisimada laba gardaqawararka